कस्तो छ हुवावेले ल्याएको चार क्यामेरा भएको पहिलो फोन, नोभा टु आई? – newslinesnepal
कस्तो छ हुवावेले ल्याएको चार क्यामेरा भएको पहिलो फोन, नोभा टु आई?
प्रकाशित मिति : ३० पुष २०७४, आईतवार ११:२६
बजारमा करिब डेढ महिना अघि भिभिएको फोन हो, हुवावेको नोभा टु आई। यो फोनमा अन्य कम्पनीका प्रिमियम फोनहरुमा हुने लगभग सबैजसो विशेषताहरु अटाएका छन् तर यसमा एउटा त्यस्तो फिचर दिइएको छ जुन नेपाली बजारमा पाइने अन्य कम्पनीका कुनै मोडलमा उपलब्ध छैनन्।
यस फोनमा चार वटा क्यामेरा छन्। १३ र २ मेगापिक्सेलका दुई सेल्फी तथा पछाडितर्फ १६ र २ मेगापिक्सेल गरी दुई रियर क्यामेरा दिइएको छ। यी फिचर्स बजारमा उपलब्ध अन्य कुनै पनि फोनमा पाइँदैन्।
यसबाहेक फोनमा १८ः९ को आस्पेक्ट रेसियोसहितको ५.९ इन्चको आइपिएस डिस्प्ले छ।
हुवावे नेपालका निर्देशक जोयेस अहिलेका उपभोक्ताले एउटा फोनमा अपेक्षा गर्ने सबैखाले फिचर्स समेटेर ‘नोभा टु आई’ ल्याइएको बताए।
‘हामीलाई थाहा छ, अहिलेको उपभोक्ताको लागि के जरुरी छ, त्यही बुझेर हामीले नयाँ डिभाइसको रचना गरेका छौँ, जुन अहिलेको समयसँग चल्नको लागि पावरफूल फिचरले भरिपूर्ण छ’ उनले भने।
त्यस्तै यो मूल्य रेन्जमा बजारमा उपलब्ध कुनै पनि फोनले नोभा टु आईसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कम्पनीको दाबी रहेको छ।
तर एउटा स्मार्टफोन उत्कृष्ट हुनलाई ठूलो डिस्प्ले वा क्यामेराले मात्र पुग्दैन्। त्यसका लागि फोनको डिजाइन्, ब्याट्री तथा अन्य सबैप्रकारका पर्फमेन्सले उत्तिकै भुमिका रहन्छ। त्यसैले हामीले यो फोनका सबै विशेषतालाई एक­एक गरी नियालेका छौँ।
डिस्प्ले तथा डिजाइन
ग्राहकले झट् हेर्दा उसलाई सबैभन्दा छिटो तान्ने पक्ष भनेको फोनको लुक्स हो। कुनै पनि फोनलाई आर्कषक देखिन त्यसको डिजाइन पनि उत्कृष्ट हुनुपर्छ।
यस फोन २१६०×१०८० पिक्सेलको एचडी रेजुलुसनसहित ५.९ इन्चको आइपिएस डिस्प्लेमा उपलब्ध छ। पछिल्लो समय स्मार्टफोन कम्पनीहरु बीच फुल भ्यु डिस्प्ले प्रविधिलाई समावेश गर्दे लगेका छन्। हुवावेले पनि त्यसको सुरुवात यसै फोनबाट गरेको छ।
फूलभ्यू डिस्प्ले प्रविधि र उच्च–गुणस्तरको ५.९ इन्च स्क्रिन भएको यो नै हुवावेको पहिलो मिडरेन्ज फ्लयागसिप हो। ८३ प्रतिशतको स्क्रीन–टु–बडि रेसियो र १८ः९ आस्पेक्टले यसलाई स्पष्ट, सफा र उज्यालो ईमेजको लागि सुन्दर ‘वाइडस्क्रीन भ्युइङ्ग’ तथा प्रिमियम बनाएको छ।
सानो स्क्रिन साइज रुचाउने प्रयोगकर्ता समेतलाई ध्यानमा राखी कम्पनीले एक हातमा फिट हुने गरी फोनको डिजाइन गरेको देखिन्छ। फोनको डिस्प्ले २.५डी को कभर्ड ग्लासले डिजाइनलाई आर्कषक बनाएको छ। यसले फोन भुँईमा खसीहालेमा समेत स्क्रिन फुटने जोखिम कम रन्छ।
यद्यपी मेटालिक डिजाइनले गर्दा गोजीबाट चिप्लने सम्भावना उच्च रहने भएकाले तथा स्क्रिनमा ‘स्क्र्याच’ हुनबाट बचाउन भने ग्राहकले कभरको प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै फोनको ‘अटोब्राइटनेस’ मोडले कम वा बढि प्रकाश भएको अवस्थामा समेत सन्तुलन मिलाउँछ।
फोनमा भोल्युम तथा स्क्रिन लक वा अनलक गर्ने ‘की’ डिभाइसको दाहिने साइडमा राखिएको छ। हेडफोन तथा चार्ज गर्ने स्लट र स्पिकर डिभाइसको तल्लो भागमा राखिएको छ।
यो फोनको स्लीक डिजाईनको सुरुवात आकर्षक फूलभ्यू स्क्रीनबाट हुँदै युनीबडिको सफ्ट, कर्भड एजसम्म रहेको छ।
डिजाइन गर्दा क्यामराहरु, फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर, युएसबी स्लट, सेन्सरहरु र फ्लयास जस्ता पक्षलाई अगाडि र पछाडि मिलाएर राखिएको छ जसले फोनलाई थप प्रिमियम बनाएको छ।
यस फोनको सबैभन्दा आर्कषक पक्ष भनेको यसको चार वटा क्यामेरा हो। फोनमा १३ र २ मेगापिक्सेलका दुई सेल्फी तथा १६ र २ का दुई पछाडितर्फको क्यामेरा छन्।
अगाडि र पछाडिका दुबै २ मेगापिक्सेल लेन्स भएका क्योमराले वस्तुको गहिराईको चित्र खिच्छ भने प्राइमरी लेन्सले भने हरेक डिटेल्सलाई क्याप्चर गर्छ।उत्कृष्ट क्यामेरा हुनलाई त्यसले बढि तथा कम प्रकाशको समयमा कस्ता तस्बिर खिच्न सक्छ भन्ने कुराले ठूलो भुमिका रहन्छ।
फोनमा १६ र २ मेगापिक्सेलका दुई रियर (पछाडितर्फको) क्यामरा छन्। दुवै डुअल–लेन्स क्यामराहरुमा अझ स्पष्ट, सफा र कलात्मक फोटोहरु र कम प्रकाश भएको अवस्थामा प्रदर्शन सुधार्न हार्डवेयर–लेबल ‘बोकी’ फिचरले मद्धत गरेको छ।
यसको १६ मेगापिक्सेलको लेन्सले हरेक डिटेलहरु क्याप्चर गर्न मद्दत गर्छ भने २ मेगापिक्सेलको ‘आरजीबी’ लेन्सले सटीक ‘फिल्ड अफ डेप्थ’ क्याप्चर गर्ने छ।
यसको रियर क्याामेराले कम वा बढि प्रकाश भएको दुबै अवस्थामा सुन्तुलन मिलाई उत्कृष्ट तस्बिर खिच्न सक्छन्। यसमा भएको एचडिआर, पेनोरमा, नाइट सट्, टाइम लेप्स लगायतका फिचर्स समेत दिइएको छ। यसका साथै यसमा भएको प्रो फोटो मोडले फोनको सेटिङ आइएसओ तथा एक्सोपोजरको म्यानुअल कन्ट्रोल समेत गदर्छ।
दुई वटा रियर क्यामेरा भएका अन्य कम्पनीका डिभाइसमा सेकेण्डरी लेन्सलाई जुम, वाइड एंगल वा मोनोक्रोम लेन्सका रुपमा प्रयोग गरिन्छ।
तर हुवावेको यस फोनमा भने सेकण्डरी लेन्सलाई फोकसका लागि मात्र प्रयोग गरिएको छ। त्यसका बाबजुद यसको रियर क्यामेराले उत्कृष्ट तस्बिर खिच्छन्।
कम प्रकाश भएको क्षणमा वाइड अपेचर मोडलसहित बोके इफेक्टले पृश्ठभूमिलाई ब्ल्र बनाई तस्बिर खिच्न लागिएको वस्तुलाई स्पष्ट देखाउँछ। यससँगै ब्युटी इफेक्टको प्रयोग गरी तस्बिरलाई अझ सफा बनाउन सकिने सुविधा यसमा दिइएको छ।
त्यस्तै सेल्फी क्यामेराको २ मेगापिक्सेलको लेन्सले फोकस तथा वस्तुको गहिराईमा गएर तस्बिर खिच्छ। कम प्रकाशमा सेल्फी खिच्नका लागि यसमा सफ्ट लाइट एलइडी दिइएको छ जसको सहायताले समान्य प्रकाशमा भैं उत्कृष्ट तस्बिर खिच्न सकिन्छ।
यसको सेल्फी क्यामेराबाट एकनासको लाइटिङ र सफ्ट लाईट सेल्फी फ्ल्यास्को मद्दतले कम प्रकाश भएको अवस्थामा पनि उत्कृष्ट सेल्फीहरुका साथ तस्बिर खिच्न सकिन्छ।
यसबाहेक यी क्यामेराहरुमा भएको पोट्रेट मोड, वाइड एपेर्चर मोड तथा मोशन फोटो लगायतका फिचर्सहरुले क्यामेरालाई उत्कृष्ट बनाएको छ।
फोनमा कम्पनीको आफ्नै अक्टाकोर किरिन ६५९ एसओसी सिपियुका साथमा ४ जीबीको रयाम्मा उपलब्ध छ। यसले फोनका कन्टेन्टहरु ‘स्ट्रीमिङ’ हुँदा–हुँदै विभिन्न एप्लीकेशनहरु एकै चोटी चलाउँदा समेत ‘स्लो’ हुने समस्या हुँदैन्।
यसका साथ ६४ जीबीको इन्टरनल स्टोरेज दिइएको छ। यसले फोनमा पर्याप्त कन्टेन्टहरु राख्नलाई स्पेसको समस्या निम्ताउँदैन्।
हुवावे एन्ड्रोईड् ७ मा आधारित इमुआईमा अपरेटिङ सिस्टममा इएमयुआई सम्मेलित छ। यसले प्रयोगकर्ताको व्यवहारको आधारमा प्रदर्शन अनुकुलन गर्ने भएकाले चलाउन निकै सहज बनाएको छ।।
फोनमा ३ हजार २४० एमएएच पावर क्षमताको ब्याट्री छ। यसको ब्याट्री हार्डवेयर र सफ्टवेयरको गहिरो सम्मेलनले फोनको ब्याट्री धेरै समयसम्म टिकाउने बनाएको छ।
फोनको ब्याट्री फुल चार्ज भएपछि त्यो २० घण्टाको टक टाइम तथा ५ सय ५० घण्टासम्म निरन्तर रुपमा ‘स्ट्याण्ड बाइ’ अवस्थामा रहन सक्छ। यसका बाबजुद पुरै दिन फोनमा विभिन्न गतिविधि गर्दा समेत यसको ब्याट्री लगभग एक दिनसम्म टिक्छ।
तर फोनको ब्याट्रीमा फास्ट चार्जिङको सुविधा भने छ्रैन्। फुल चार्ज हुन धेरै समय नलागेपनि यसमा फास्ट चार्जिङ दिइएको भए फोनको ब्याट्री अझ अब्बल हुनेथियो।
गेमिङ तथा सेन्सर
यसमा हेभ्भी गेमहरु खेल्दा स्लो हुने तथा फोन तात्ने समस्या देखिदैन्। तर फोनमा स्पीकर तल्लो भागमा भएकाले यसले ल्याण्डस्केप मोडमा गेम खेल्दा औँलाले स्पीकर ढाक्छ र आवाज बाहिरसम्म आउन कठिन हुने समस्या देखिन्छ।
यसको फिंगरप्रिन्ट सेन्सर निकै फास्ट छ। त्यस्तै यसबाहेक फोनमा कम्पास, प्रोक्जिमिटी लगायतका अन्य सेन्सर दिइएको छ। तर यसमा जाइरोस्कोप सेन्सर भने समावेश छैन्। यसले गर्दा डिभाइसबाट भिआर हेडसेट वा ३६० डिग्री भिडियो हेर्न मिल्दैन्।
यसबाहेक फोनमा दिइएको जेस्टर फिचर्सले क्यामेरा, म्युजिक लगायतका एपहरु स्वतरुपमा खोल्छन्। यसबाहेक स्क्रिनमा औँलाले ‘नक’ गर्दा स्क्रिन स्ट् हुने तथा कन्ट्याक्टमा भएका ब्यक्तिको नाम उचारण गर्दा ‘क्वीक कल’ हुने लगायतका थुप्रै विशषताहरु छन्।
यसबाहेक फोनमा ‘स्वीफ्ट किबोर्ड’ डिफल्ट किबोर्डका रुपमा दिइएको छ जसलाई ‘गुगल किबोर्ड’ मा परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
हाल बजारमा कालो, सुनौलो तथा अरोरा निलो गरी ३ प्रकारका रङ्ग भेरियन्टमा उपलब्ध यस फोनको मूल्य ३३ हजार ९ सय रुपैंयाँ निर्धारण गरिएको छ।
चार वटा क्यामेरा, १८ः९ आस्पेक्ट रेसियोसहित ५.९ इन्चको फुल भ्यु डिस्प्ले तथा आर्कषक डिजाइनमा भएको यस फोन यो मूल्य रेन्जमा बजारमा उपलब्ध अन्य सबै मोडलभन्दा उत्कृष्ट छ।